Sein Lyan - စိ န် လျှံ: 2011
Writer Sein Lyan Time 9:02 am 11 comments: Links to this post
ညီမရဲ့ အတွေး ကဗျာ
Writer Sein Lyan Time 6:48 pm3comments: Links to this post
တနင်္ဂနွေ မနက်(၂၆.၁၁.၂၀၁၁) က အဖေတို့ကို တိုပါရိုး ဘုန်းကြီးကျောင်း ပို့ပေးတယ်။ လမ်းလျှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ အဖေတို့နဲ့တူတူ လမ်းလျှောက်သွားတယ်။ အဖေနဲ့ အမေက သိပ်တက်ကြွတယ်။ လမ်းလျှောက်မယ် ဆိုတာချည်းပဲ။ အမေ့ကို ကြည့်ရတာ ကလေးတယောက်နဲ့ တူတယ်။ လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့တောင် သိပ်ပျော်နေတာ။ အနောက်ကနေ ကြည့်ပြီး သဘောကျမိတယ်။ အဖေကတော့ အရမ်းစူးစမ်းလေ့လာတယ်။ ဘယ်ရောက်ရောက် သူသိတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကို မှတ်ထားတယ်။ မြို့တပတ် ရထားလိုက်စီးမယ်ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ပေါ့။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဘုရားဖူးပြီးတော့ တိုပါးရိုး စင်တာကို လမ်းလျှောက်ပြန်လာကြတယ်။ အဖေက အကျီနဲ့ ဖိနပ် အရမ်းဝယ်ချင်နေတာ။ အမေက ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ပိုက်ဆံတွေထည့်ပြီး လိုက်ရှင်းရတာ ၀ါသနာက ပါသေးတယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်း ဖေတို့ မေတို့ လဲလာတဲ့ ငွေတွေကို တောင်းပြီး ဘဏ်ထဲ ပြန်ထည့်ရတယ်။ မဟုတ်ရင် ဟိုတရွက်ဒီတရွက် ဘာမှန်းမသိ ၀ယ်မှာစိုးလို့။ ရောက်တဲ့နေ့က တိုးပါရိုးစင်တာထဲမှာ အပေ့ါခဏ၀င်သွားတာ ပလက်တီနမ် ဆိုင်ဝင်ပြီး ဆွဲကြိုးတကုံး အတင်းသွားဝယ်နေတယ်။ ပြန်ထွက်လာတာမြန်လို့။ ဈေးလဲ မမေးတတ်.. ပစ္စည်းကြည့်ပြီး ကြိုက်တာနဲ့ လက်ညှိုးထိုးဝယ်တဲ့ အမေနဲ့ ဈေးရောင်းတဲ့သူက အံကိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ပိုက်ဆံပေးခါနီးမှာ ကိုယ်ပြန်ရောက်လာတော့ အမေ့ကို ချော့ပြောရတယ်။ အမေ နောက်လထဲ ဒစ်စကောင့်ချတာရယ်. ပစ္စည်းမှန်တဲ့ဆိုင်မှာ ၀ယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောရတယ်။ အမေကတော့ ရောင်းတဲ့သူကို အားနာတဲ့ပုံနဲ့ ကိုယ်ကလဲ ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။ မဟုတ်ရင် သုံးရာကျော်လောက်ပါသွားမယ်။ နှမြောလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တန်ဖိုးရှိတာကို ပေးချင်တာပါ။ (အမေ့ကိုဒီလိုပဲ ချော့ပြောရတာပေါ့).
အဖေ့အကြောင်းကို ဆက်ပြောဦးမယ်။ တိုပါးရိုးရောက်တော့ အဖေက ဖိနပ်ဆိုင်တွေကို ၀င်ကြည့်တယ်။ ဆိုင်တဆိုင် ရောက်တော့ အဖေက သူ့ အကြိုက်ဖိနပ်တွေ့လို ထင်ပါတယ်။ ဈေးဝင်မေးတော့ သင်္ကြန်ညီမလေးက လိုက်ဝင်ပြီး ကူမယ်လုပ်တော့ ကိုယ်က တားလိုက်ပါတယ်။ အဖေက ခပ်တည်တည်ပဲ သူကြိုက်တဲ့ ဖိနပ်ကို ကိုင်. ကောင်တာထဲ သွားပြီး “I want 4၆ ပေးပါ “လို့ မြန်မာအင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကိုသွားပြောပါတယ်။ ကိုယ်လဲ အသာနေပြီး အဝေးကနေ ကြည့်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်လဲ 46 ရှာတာ မရလို့ထင်ပါတယ်။ 45 ဆိုဒ်ကို လာပေးတော့ အဖေက “Big ပေးပါ. ဒါနဲ့ မရဘူးလို့ “ ပြန်ပြောပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်ကလဲ သဘောပေါက်ဟန်တူပါတယ်။ ထပ်ရှာပေးပါတယ်။ ရတော့ အဖေက “How much ဒီဖိနပ် “ဆိုပြီး ဖိနပ်ဈေးကို မေးကြည့်တယ်။ ၁၉ ဒေါ်လာ ဆိုတော့ အဖေက မြန်မာငွေနဲ့ ပြန်တွက်နေတယ်။ ကိုယ်က ငွေဈေးဘယ်လောက် ရှိမှန်းတောင် ကောင်းကောင်းမသိတဲ့ အတွက် ကိုယ်တွက်ပေးလိုက်တာ က အမှား။ သူတွက်တာက အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဖေ့ကို ကောင်းကောင်းလေး စီးစေချင်လို့ အဖေရယ် ဒီမှာက အတုတွေ မ၀ယ်နဲ့. Bata ဖိနပ်ဆိုင်မှာ ဖိနပ်တွေ ပိုများပါတယ်။ အဖေ့အကြိုက်ရွေးပါဆိုတော့ အဖေက ဆိုင်ရှင်ကို လက်ပြပြီး “GoBak သွားလိုက်ပါဦးမယ်” လို့ နှုတ်ဆက်တော့ ဆိုင်ရှင် သဘောကျပြီး ရယ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့် ညီမလဲ မအောင့်နိုင်တော့ပဲ မျက်ရည်ကျမတတ် ရယ်မိပါတယ်။ အဖေကတော့ သူ့ပြောတဲ့ အီးကို တရုတ်ကြီး နားလည်တယ်ဆိုတော့ သဘောတွေ ကျနေလေရဲ့ ။ သူလိုချင်တဲ့ ဖိနပ်မ၀ယ်ခဲ့ရလို့လဲ ဖိနပ်ဆိုင်ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့။ (ညနေရောက်တော့ Bata မှာလိုချင်တဲ့ ဖိနပ်ပုံစံမျိုး ၀ယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဈေးက မနက်က ဈေးထက်ပိုကြီးနေတော့ အဖေက ယူရမှာ အားနာနေပြန်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ သူကြိုက်တာ တွေ့တော့ ဈေးမဆစ်နဲ့ ပေးတာယူ လို့ နည်းနည်း မာန်လိုက်မှ ပျော်ပျော်ကြီးယူခဲ့ပါတယ်)
အမေကတော့ တိုပါးရိုးက ပေါင်ပေါ် ဘောင်းဘီတို နှစ်ထည် ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောပါသေးတယ်။ နောက်တခါလာရင် တရုတ်စာပဲ သင်ခဲ့မယ်။ အင်းဂလိပ်က ခက်တယ်။ သူ့ အသက်အရွယ်နဲ့ သင်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး တဲ့။ အဖေကတော့ အိမ်ပြန်ရောက်ကတည်းက အိမ်က ညီတွေ ဆီက Dictionary အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာ စာအုပ်ကို တောင်းပြီး လေ့လာနေလိုက်တာ ငါးမိနစ်ကြတော့ ဟောက်သံပါကြားရပါလေရော..။ အပြန် ကားပေါ်က ဆင်းတော့ TAG လုပ်ဖို့ မေ့တဲ့ အမေကို ကိုယ်က စပါတယ်။ မေမေ နောက်တခါ ကားစီးလို့ မရတော့ဘူး။ ရဲ ကတွေ့ရင် ဖမ်းတော့မှာ လို့ ပြောတော့ အမေက ရဲလာရင် ပိုက်ဆံ ၅၀ ထုတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမေပြောတာကို သဘောကျလို့ အိမ်မှာ ရယ်ရသေးတယ်။ :D
ညနေရောက်တော့ အိမ်က ညီတွေ ညီမတွေ အမတွေနဲ့ စစ်တီးဟောကို ချီတက်. အဖေလိုချင်တဲ့ ဖိနပ်ကို Bata မှာဝယ်ပေး။ အင်းလေးမှာ ထမင်းစား. ဘီယာသောက်ပြီး ငါးခြင်္သေ့ ရုပ်ကြီးဆီ ချီတက်ကြပါတယ်။ အမေရော အဖေရော. တအံ့တသြနဲ့ ပျော်နေပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးနေပြန်တယ်။
အဖေက အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ဘလော့ဂါ ညီတွေ ညီမတွေ စုစုရုံးရုံးနဲ့ စားလိုက်. သောက်လိုက်. သွားလိုက်. ချီးပေါက်လိုက် နေတာကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ ရောက်တော့လဲ ဒီလိုဘယ်တော့မှ မခွဲဖို့ ပြောပါတယ်။ ကိုယ့် ဒီညီတွေ ညီမတွေကို ချက်ကျွေးတာကိုလဲ သိပ်သဘောကျပါတယ်။ ကိုယ်ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် အိမ်မှာ နေတတ်တဲ့ အကျင့်တွေကို လဲ အဖေက ပြန်ဖောက်သည်ချပါတယ်။ သူ့ ခံစားချက် တချို့ကိုလည်း ညီတွေကို ရှယ်ပါသေးတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သူ့ ပြောတာ မှားနေရင် ကိုယ်က ပြန်ပြင်ပေးရင်း သူကလဲငြင်း . ကိုယ်ကလဲ ငြင်းနဲ့ စကားများတတ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူပြောသမျှ ကိုယ်နားထောင်. ကိုယ်ပြောချင်တာကို ချော့ပြောနဲ့ နေရပါတယ်။ အဖေက ပြောပါတယ်.. အခုသားမှာ ကလေးတွေ အများကြီး နဲ့ .. ဒီလိုမြင်ရတော့ အဖေစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ ပြောပါတယ်။ ကိုယ်လဲ ပြန်ပြောပါတယ်။ အရင် ခလေးတွေ အများကြီးထဲမှာ အခု နောက်ထပ် နှစ်ယောက်ပိုလာပြီးလို့.။ အရင်က ကလေးဆိုးကြီးက ကိုဘို. နဲ့ မမပြာ . အခု ကလေး ဆိုးကြီးထက် ဆိုးတဲ့ အဖေနဲ့ အမေရောက်လာတယ်လို့ ပြောတော့ သဘောကို ကျလို့..။
ဒီနက် ရုံးသွားအိပ်ယာထတော့ အဖေရော အမေရော မရှိတော့ပါဘူး။ လမ်းလျှောက်ထွက်သွားကြပါတယ်။ အဖေ့ကို ကိုယ့်လိပ်စာကဒ်လေးပေးထားတယ်။ စာရွက်တရွက်မှာလဲစာရေးပေးထားတယ်။ ငါ့အဖေလမ်းပျောက်လို့ ဒီစာရွက်ပြပြီး အကူအညီတောင်းရင်း ငါ့ကို လှမ်းခေါ်ပါ။ ဒါမှ မဟုတ် နီးစပ်ရာ တက်စီနဲ့ အိမ်ပြန်ပို့ပေးပါဆိုပြီး ရုံးလိပ်စာရော အိမ်လိပ်စာပါ ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အဖေကတော့ ရထားပတ်စီးပြီး မြို့ပတ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ ရုံးသာလာရတာ ကိုယ်ရုံးထွက်လာတဲ့ အချိန်အထိ အိမ်ပြန်မရောက်တော့ စိတ်ကပူတယ်။ ရုံးရောက်ပြီး ဖုန်းဆက်မှ ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်လာတယ် ဆိုမှ စိတ်အေးရတယ်။ ရထားပတ်စီးဖို့ကို တားထားရသေးတယ်။ နည်းနည်းလူလယ်ကျမှ စီးလို့ ပြောထားရတယ်။ အခုတော့ အိမ်မှာ ထမင်းဟင်း ချက်စားနေလေရဲ့ ။
ခုလောလောဆယ်တော့ ZOO ပို့လှည့်ပြန်.. စစ်တီးဟော. တိုပါးရိုး ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ဒူးရင်းသီးရှေ့က ငါးခြင်္သေ့ ဆီကိုပဲ ပို့ရပါသေးတယ်။ ကိုယ်ကလဲ ကျောင်းတဖက်နဲ့ ရုံးကလဲ နောက်အပတ်လောက်မှ နားရမှာဆိုတော့ ခုရက်ပိုင်းတော့ အဖေတို့ အိမ်မှာပျင်းနေမယ် ထင်တာပါပဲ။
နောက်ရက်တွေ အတွက် အစီအစဉ်လေးထပ်ဆွဲလိုက်ပါဦးမယ်။
Writer Sein Lyan Time 4:54 am 10 comments: Links to this post
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, အမှတ်တရ ခရီး
မနေ့ (၂၅.၁၁.၁၁) မှာ အဖေတို့ ရောက်မယ်ဆိုတော့ အလုပ်ကနေ ၃ နာရီ ရုံးဆင်းပြီး လေဆိပ်ကို အရောက်သွားကြိုခဲ့တယ်.။ ကိုယ်နဲ့ အတူ မောင်ဆောင်းရယ်.. ကိုဘိုရယ်.. သင်္ကြန်ညီမလေးရယ်.. လေးယောက်ပေါ့။ လေယာဉ်ဆိုက်ချိန်ရောက်တော့ ကိုယ်က နဂိုကတည်းက စိုးရိမ်စိတ်ကြီးတတ်တော့ လေယာဉ်ဆိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက်နဲ့ ဂဏာ မငြိမ်ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ အလျှိုလျှို ထွက်လာကြတဲ့ လူတွေကို ငေးရင်း.. ခြေဖျားထောက်လှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ နာရီဝက်လောက်ကုန်သွားတယ်။ ကိုယ့်လူတွေ တယောက်မှာ မမြင်ရသေးဘူး။ ခေါင်းက ဒသဂီရိ ခေါင်းဆယ်လုံးထက်မကကြီးသွားတယ်.။ စိတ်ထဲမှာလဲ ကိုယ်စိတ်ပူတဲ့ အတိုင်းဖြစ်နေပြီးလားလို့ တွေးနေရင်း ကိုယ့် အဖေရယ်. အမေရယ်. ညီမရယ် သုံးယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဟင်းကနဲ့ သက်ပျင်းချ... ပျော်သွားတယ်။ သူတို့ မျက်နှာကိုကြည့်တော့ ယောင်လည်လည်နဲ့ မမပြာကို လိုက်ရှာနေတဲ့ပုံ..။
ကိုယ်ကတော့ အလိုလို သိလိုက်တယ်.. မမတစ်ယောက်မှာလိုက်တဲ့ အရက်ဝယ်နေလောက်ပြီးလို့..။ ဒီလိုနဲ့ မမကို စောင့်နေရင်း ဆယ်မိနစ်.. ဆယ့်ငါးမိနစ်..။ တချို့တွေက ထွက်လာကြပြီးဆိုတော့ မမက ဘာလို့ အရက်ဝယ်တာ ဒီလောက်ကြာနေလဲလို့ တွေးရင်း စိုးရိမ်စိတ်က ၀င်မိပြန်တယ်။ အထုတ်တွေကို ဒီအတိုင်းဆွဲချထားတဲ့ ကိုယ့်အဖေနဲ့ အမေက ခဏကြာတော့ ကော့ကော့နဲ့ ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး အရက်တလုံးဝယ်နေတာကို မြင်နေရတယ်။ ကိုယ်ကတော့.. အဲလဲ့...ဟုတ်ပေသားပဲပေါ့လို့ စိတ်ထဲက တွေးရင် မမကို မျှော်နေမိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အထုတ်တွေ ဒီအတိုင်းဆွဲချထားတာကို မြင်တော့ အထဲက ရဲ ကို အကူအညီတောင်းပြီး သူတို့ လှည်းမဆွဲတတ်ဘူး။ ဆွဲပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ အီးလိုလဲ မရဘူးလို့ ပြောတော့ ရဲ ကကူညီရှာတယ်။ လှမ်းကြည့်နေတဲ့ အဖေ့ကိုလဲ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ လှည်းပေါ်ကို ပစ္စည်းတင်လိုက်ဖို့ ပြောပါတယ်။ အဖေလှည်းပေါ်ပစ္စည်းတင်ပြီးတော့ သူက လာရာလမ်းကြောင်းလှည့်ပြီး မမကိုသွားရှာလို့ စိုင်းပြင်နေတာကို ကိုယ်သိလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဖေ့ကို လက်ဟန်ခြေဟန်ပြပြီး မသွားဖို့တား။ ပြီးတော့ အထုတ်တွေကုန်ရင် ထွက်လာလိုက်လို့ မှန်ကြားထဲကနေကြားအောင် ပြောတော့ အထုတ်လှည်းလေးကို တွန်းပြီးထွက်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မမ ရဲ့ အရိပ်အယောင်ကိုတောင် မမြင်ရသေးပါဘူး။ အဖေတို့ကို မေးတော့ အဖေက ပထမ ညီမလေးကို ခေါ်တယ်. ပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပြီး မမကို ခေါ်သွားတယ်ပြောတော့ ကိုယ်တော်တော်စိတ်ပူသွားတယ်။ ဘုရား..ဘုရား.. မမကိုများ ခဏခဏလာလွန်းလို့ ဖမ်းထားပြီး ပြန်ပို့လိုက်ရင် ဒုက္ခလို့ တွေးရင် ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်.. ကိုဘိုရော.. မောင်ဆောင်းရော.. မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်.. ။ ကိုယ်က ရုံးကိုဖုန်းခေါ်... ငါ့ကို ရုံးက ကြိုတင်လုပ်ထားတဲ့ ထောက်ခံစာ (စိတ်ပူစွာနဲ့ လုပ်ထားတာ) ကို မေးလ်ထဲလှမ်းပို့ခိုင်းရတယ်။ ပြီးတော့ မှန်အ၀မှာကိုနေပြီး မမကို မျှော်နေတာ..။ နာရီဝက်... လေးဆယ့်ငါးမိနစ်.. ကိုယ့်မိဘကိုတောင် ဖက်လှဲတကင်း မနှုတ်ဆက်နိုင်ပဲ ထိုင်ခိုင်းထားပြီး မမအတွက် စိတ်ပူနေတာ ခေါင်းထဲမှာ အထွက်အထိတ်..။ တနာရီ ကျော်ကျော်လောက်စောင့်ပြီးမှ.. မင်းသမီးချော န၀ရတ်ပြာပြာက ကော့ကော့ နဲ့ ထွက်လာတာ ကိုယ် ထီဆုပေါက်တာထက်တောင် ၀မ်းသာပြီး ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချ..။ ကိုယ့်မိဘ အနားပြန်ကပ်နိုင်တော့တယ်။
အိမ်ကိုတက်စီနဲ့ အိမ်ပြန်လာတော့ တလမ်းလုံး အမေက လေယာဉ် စီးမ၀သေးဘူး. ထပ်စီးချင်သေးတယ်ပဲ တဖွဖွပြောနေတယ်။ အဖေကတော့ သူလေယာဉ်ပေါ်မှာ ဘီယာတောင်းသောက်တာ ထမင်း စားပြီးမှ ဘီယာလာပေးတယ်။ ဘီယာလဲ ပေးရော.. လေယာဉ်ဆိုက်ရောဆိုပြီး မခဲမကျေစွာ တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ ဖြစ်နေတာကို ကြည့်ပြီး သဘောကျမိပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ အင်မီဂရေးရှင်း အတွေ့အကြုံကို မေးရတယ်။ ဖြစ်ပုံက အရင်ဆုံးဝင်တဲ့ ညီမကို ရဲ ကခေါ်သွားတယ်။ အဲဒါကို မမပြာက အနောက်ကနေလိုက်ရှင်းဖို့ သွားတာကို ရဲမ ကို မောင်းထုတ်တယ်။ မမကလဲ မသွားပဲ ပေကပ်ကပ်နဲ့.. ညီမက အင်္ဂလိပ်လိုမရတော့ အဆင်မပြေမှာကို စိုးရိမ်ပြီး အတင်းပေကပ်ကပ်သွားရပ်နေတော့ ရဲမ က မောင်းထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သမီးအတွက် စိတ်ပူရှာတဲ့ အဖေက ရဲ တယောက်အနားသွားပြီး သူ့ သမီးကို ပြန်လွှတ်ဖို့ ပြောပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်က အဖေအဲဒီရဲ ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတာ ပြန်ပြောပြဆိုတော့.. အဖေက ရဲ အနားသွားပြီး.." ဆရာ.. ဆရာ.." လို့ ခေါ်တော့ ရဲ က လှည့်ကြည့်ပါတယ်တဲ့..။ ပြီးတော့ အဖေက " This My Wife " ဆိုပြီး သူ့ မိန်းမကို အရင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိုင် ဒေါတာ... လို့ပြောပြီး ဖမ်းသွားတာကို အီးလို မပြောတတ်တော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးပြလိုက်ပါတယ်။ ရဲ က အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုတော့ သူက အားရပါးရပဲ ဖမ်းသွားတာလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအခါ ရဲ က သဘောပေါက်ပြီး သူ့ကို လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ မပူပါနဲ့ လက်ဗွေနှိပ်ပြီး ပြန်လွှတ်ပေးမှာပါလို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြန်ပြောပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ အဖေက အောင်နိုင်သူကြီး အထာနဲ့ သူပြောလိုက်လို့ သူ့ သမီးထွက်လာရတယ်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ညီမ ကထွက်လာပြီး မမအလှည့်ကျမှ မမကို ဆွဲစိပြီး တမင် အမြင်ကတ်ပုဒ်မနဲ့ အခန်းထဲ တနာရီကြာ ခေါ်ထားလိုက်တာပါပဲလေ.။ အိမ်မှာ အဖေက သူရဲ ကို ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတာ ပြန်ပြောရင်း တ၀ါးဝါးနဲ့ ရယ်ရပါလေရော..။
အဲဒီညက ပင်ပန်းလို့ သူဝယ်လာတဲ့ ဘလက်လေဗယ်လေးသောက်ဖို့ အမြည်းလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တနေကုန်ကိုက်ထားတဲ့ခေါင်းကို အဖေ့ကို နှိပ်ခိုင်းပါတယ်။ အမေက ခေါင်းအမြဲကိုက်တတ်တဲ့သားအတွက် ဆေးဝယ်လာပါတယ်။ သောက်ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုံးကျဉ်ဆေးတဲ့..။ အဲဒါ ဟိုမစင်ဝထဲကို ထဲ့ရတယ်ဆိုပဲ။ အမေက ရောက်ကတည်းက အဲဒါကို ထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ ပတ်ပြေးနေရတာ အမောပါပဲလေ။ သူမထည့်ခင်ကတည်းက ကိုယ်က ကြိမ်းနှင့်နေသူပါ. :P
ဒီနေ့ မနက်ရောက်တော့ အရင် ကတည်းက စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း တရိစ္ဆာန်ရုံကိုသွားဖို့ ပြင်ဆင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဖေတို့ကို လိုင်းကားစီးတတ်အောင် ဆိုပြီး ကဒ်တွေပေးပြီး ဘယ်လို စီးရလဲ ဆိုတာ ပြပါတယ်။ အတက်တုန်းကတော့ ပြထားပေးတော့ အဖေက မှန်ပါတယ်။ ကားပေါ်ကလဲ ဆင်းရော.. သူက သူ့ကဒ်နဲ့ ဖြတ်ပြီး ဆင်းလာပါတယ်။ အဲဒါကို ကားသမားက အဖေ့ကို လှမ်းခေါ်တော့ အဖေက ခပ်တည်တည်နဲ့ သူ့ကဒ်ကို ဖြတ်ပြီးကြောင်း ကားသမားကို ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားလှမ်းပြပါတယ်။ အသံလဲ မြည်ပါတယ်ဆိုတာ လှမ်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ သူဖြတ်ခဲ့တဲ့ကဒ်က မနေ့ညက အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တဲ့ 1818 ကဒ်ပါ.။ကိုယ်က အဲဒီကဒ်မဟုတ်ဘူး ဆိုမှ ဘောင်းဘီအိတ်ကို ပြူးပြူးပြာပြာ ပြန်နှိုက်ပြီး သွားပြန်ဖြတ်ပါတယ်။ အဖေပြောတော့ ဘယ်နဲ့ ညာ ဘောင်းဘီအိတ် အနှိုက်မှားသွားလို့ပါတဲ့လေ.။ ဖြစ်ရလေ.. အဖေရယ်..။ :D
ဒီလိုနဲ့ ဘလော့ဂါ ညီ(တောင်ပေါ်)ရဲ့  အချိန်းအဆက်နဲ့ တရိစ္ဆာန် ရုံနဲ့ နီးတဲ့ ၀ုလန်း ကို ရထားစီးသွားပါတယ်။ သိပ်နီးပါတယ်။ :D ညီ(သက်နိုင်)က အာမိုကီယိုမှာ ဆင်းပြီး အဲဒီကို ရောက်တဲ့ တစီးတည်းသောကားကို စီးပါဆိုပေမယ့် ၀ုလန်းကို အားသန်ပြီး ၀ုလန်းမှာလူစုကြပါတယ်။ အဲဒီက တစီးတည်းသော ကားကို လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်စောင့်ပြီး သကာလ အဲဒီကားက တနင်္ဂနွေမှ ထွက်တယ်ဆိုတာကို သိရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တခြားကားပြောင်းစီးမယ်ပြောပြီး မှတ်တိုင်တွေကို တွေ့ပါတယ်။ အနီးဆုံး ၉၆၀ ဆိုတာလဲ တွေ့ရော.. အဲဒီကားကို လှမ်းမြင်တဲ့ ညီတောင်ပေါ်က ရှေ့ကနေပြေးလိုက်တော့ နောက်က အားလုံးလဲ ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ ပြေးလိုက်ကြပါတယ်။ ကဲ.. လိုက်လေ ဝေးလေ.. ကားက မရပ်ပါဘူး။ မရပ်ဘူးဆိုတာက အဲဒီကားကလဲ သူ့ဂိတ်မဟုတ်တော့ ကိုယ်တွေ ပြေးလဲ မရပ်ပေးပါဘူး။ ကိုယ့်အမေနဲ့ အဖေလဲ ပြေးလိုက်ရပါတယ်။ဝေးသထက်ဝေးသွားတဲ့ ကားကို ကြည့်ပြီး အရှက်ပြေ ရပ်.. ပြီးတော့ ဆရာတောင်ပေါ်ရဲ့  အစီအစဉ်နဲ့ နောက်ဆုံး ၉၅၀ ကိုပဲစီးတော့မယ်ဆိုပြီး အဲဒီမှတ်တိုင်ကို ပြန်သွားပြန်တယ်။ မိနစ် ၂၀ လောက်စောင့်ပြီး ဆရာ တောင်ပေါ်က တက်စီ စီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြန်တော့ ကိုယ့်အမေနဲ့ အဖေလည်း ယောင်လည်လည်နဲ့ အနောက်ကလိုက်ပြန်လေရော.။ တက်စီ စီးမယ့်နေရာရောက်တော့လဲ ထမင်းစားချိန် မို့ ဘယ်တက်စီမှ မရပါဘူး။ မိုးတွေကလဲ သဲသဲမဲမဲ..။
နောက်ဆုံး တက်စီတစီးလာလို့ ကိုယ်တို့မိသားစု အရင်သွားနှင့်ပါတယ်။ မိုးတွေက သည်းနေတော့ ZOO အ၀မှာ ငုတ်တုတ်လေး နောက်က လူတွေကို ထိုင်စောင့်ပါတယ်။ နောက်ကလူတွေလဲ ရောက်ရော.. မိုးတွေကလဲ သဲရော..။ အဲဒီတော့ တခုခုစားမယ်ဆိုပြီး KFC မှာ မှာစားကြပါတယ်။ မိုးတွေက မတိတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး လှည့်ပြန်ပါတယ်။ အဖေတို့ စိတ်ချမ်းသာအောင် အ၀င်အ၀မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမေ့ကို သကြားမုန့် တခုဝယ်ကျွေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အောင်မြင်စွာနဲ့ တပ်ဆုတ်ပြီး သကာလ ကားဂိတ်ဆီသို့ လမ်းလျှောက်လာပါတယ်။ အမေကတော့ နောက်တခါတော့ ပို့ပေးဦးနော်.. ဆိုပြီး ကတိတွေ အထပ်ထပ်တောင်းနေပါတယ်။ ကားဂိတ်လဲ ပြန်ရောက်ရော... နေပူလိုက်တာမှ ခြစ်ခြစ်ကို တောက်လို့..။
ညီတွေက ဦး အထဲပြန်ဝင်မလာမေးတော့ အဖေ စိတ်နာစွာနဲ့ ပဲ.. တော်ပြီးငါ့ကောင်... စိတ်လုံးဝ နာသွားပြီးလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ အမေကတော့ ပြန်သွားမယ် တကဲကဲ လုပ်နေတော့ မနည်း အိမ်ပြန်ရောက်အောင် ပြန်ဆွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖေတို့ကို ပထမဆုံး ပို့ပေးတဲ့ zoo လည်း မထူးစွားနဲ့ လှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ အော် .. ရယ်.... အဖေနဲ့ အမေရယ်... ကြက်ရိုးပြုတ်ပြီး နားလေပေးပါ... .. :P
အဖေနဲ့ အမေက တော်တော် တက်ကြွနေပါသေးတယ်။ ကိုယ် အလုပ်ပြန်တက်တဲ့ နေ့ကို မျှော်နေတယ်။ အခန်းထဲမှ အမေနဲ့ တိုင်ပင်နေတာ ကြားရတယ်။ သားရုံးတက်တဲ့နေ့ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့နေ့ကျရင် အဖေက အမေ့ကို ခေါ်ပြီး ရထား အစအဆုံး လိုက်ကြည့်မယ် လို့ ညှိနေပါတယ်။ အမေကတော့ ရဲ ဖမ်း ခံရမှာ ကြောက်လို့ မသွားဘူးချည်းပြောနေတာပါတယ်။ အဖေကတော့ ဒီနေ့ တရက်နဲ့တင် သူလမ်းတွေ အကုန်မှတ်မိသွားပြီးလို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့ ပြောနေတာနဲ့ တင် ကိုယ် ရုံးပြန်တက်ရမှာတောင် ခပ်လန့်လန့်ရယ်လေ..။ အော်...ရယ်..။
အိမ်မှာ လူစုံ တက်စုံနဲ့ အမြဲ ဆူညံစွာနေတတ်တဲ့ ညီတွေ ညီမတွေ အမတွေကို မြင်တော့ သူတို့ ပိုပျော်ပါတယ်။ လူစည်တဲ့ ကိုယ့်အိမ်လေးကို အရမ်းသဘောကျနေပါတယ်။ ကိုယ့်ညီအရင်း ညီမအရင်းလို ချစ်ရတဲ့ (ဘလော့ဂါ) ညီတွေ ညီမတွေက ကိုယ့်အဖေအမေကို အရေးတယူနဲ့ သူတို့ မိဘတွေ လို သဘောထားပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး လိုက်ပို့ပေးတာကို မြင်တော့ အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်။ ဒီအတွက် ဒီညီတွေ .. ညီမတွေ ရှိရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေ ကြောင့်လဲ အဖေတို့ ဒီလို လာနိုင်တယ်။ ဒီလူတွေ ကြောင့်လဲ အဖေတို့ ကားဂိတ် မှာ ပြေးလိုက်လွှားလိုက် ကားစီးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီညတော့ ZOO တခုလုံးကို အပြင်ကနေ ကြည့်ခွင့်ရလိုက်တာ ပင်းပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားပါပြီးခင်ဗျာ..။ နောက်ရက်တွေမှာ..ဘယ်သူတွေ.. ဘယ်ကိုပို့ပြီး ဘာဖြစ်ဦးမလဲ ဆိုတာ.. တွေးရင်းးးး
Writer Sein Lyan Time 4:40 pm 10 comments: Links to this post
ခုရက်ပိုင်းအတွင်း စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားတယ်။ တနေကုန်တွေးတယ်။ ညအိပ်လဲ အိပ်မက်တွေမက်တယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ခရီးတွေထွက်တယ်။ မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေသွားတယ်။ ကိုယ်မကြားဖူးတဲ့ စကားတွေ ကြားရတယ်။ မိုးလင်းတော့လဲ တွေးရင်း အလုပ်သွား၊ အလုပ်နားတဲ့ အချိန်တွေးတယ်။ လမ်းမှာလဲ ဖုန်းလေးနဲ့ ဂူဂယ်တယ်။ ရှာတယ် ဖွေတယ်။ မေးတယ်။ မြန်းတယ်။ နေ့နဲ့ ညနဲ့ ညနဲ့ နေ့နဲ့ စိတ်မအား စိတ်မနားရပါဘူး။
အဓိက အကြောင်းအရင်းက ကိုယ့်မိဘတွေ ဒီကိုလာမှာဖြစ်လို့ပဲ။ တခြားလူတွေ အတွက်တော့ မသိဘူး။ တခြားလူတွေ သူတို့ မိဘတွေကို ခေါ်တုန်းကတော့ ဘယ်လို နေမလဲ မသိဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ရင်ခုန်တယ်။ ဒီကိုရောက်လာရင် သူတို့ကို ဘယ်လိုထား၊ ဘယ်ကိုပို့ ရမလဲ ဆိုတာ အမြဲတွေးတယ်။ ခေါ်မယ်လို့ လုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်က စပြီး ခေါင်းထဲမှာ ဘယ်ကိုခေါ်သွားမလဲ။ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ မျိုး အမြဲတွေးတယ်။ သူတို့ကိုဘယ်လို ပျော်နိုင်ထားရမလဲ ဆိုတာတွေးတယ်။ ရောက်နေတဲ့ ခဏလေးမှာ သားကို စိတ်ကောက် စိတ်ဆိုးပြီး မပြန်သွားစေချင်ဘူး။ သူတို့ မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာတွေ လိုက်ပို့ပေးချင်တယ်။ ကိုယ်က ဒေါသကြီး စိတ်ဆတ်၊ ခေါင်းကိုက်ရင် စိတ်က မထိန်းနိုင် ဘူး ဆိုတာ မိဘတွေ က နားလည်ထားပေးမယ့် သူတို့ ရှိနေတဲ့ အချိန် သူတို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မယ့် စကား မျိုး ၊ ဒေါသထွက်မိတာမျိုး မဖြစ်ဖို့ ခုကတည်းက လေ့ကျင့်ရတယ်။ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး ပြန်သွားရင် အကုန်လုံးက သဲထဲရေသွန်။ ကိုယ့် လဲ နောင်တ ရလို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်။ ခေါင်းမကိုက်၊ ဒေါသမထွက်ဖို့ ဆုတောင်းတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒီလိုမျိုးက အစ ကြိုတွေ မိတယ်။ စိတ်မောတယ်။
ကိုယ့် အမေက တောသူမ၊ အဖေက ဆင်းရဲသား ဘ၀ကနေတက်လာတဲ့သူဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စကား ကို Yes No ခေါင်းညိတ်ပဲ တတ်လိမ့်မယ်။ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး ကိုယ့် အမ ပြာပြာ လိုက်ပါ အကုန်စီစဉ်ထားပေမယ့် ငါ့အမေကိုများ တယောက်ယောက် က အင်္ဂလိပ်လို မေးလိုက်ရင် ကြောက်ပြီး မျက်ရည်ဝဲ သွားမလား၊ မတော်လို့ ငါ့အဖေကို မေးရင် သူမျက်နှာငယ်သွားမလား...တွေးမိတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သွားမကြိုနိုင်ဘူး။ အလုပ်တွေက ပိနေတုန်း။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် စဉ်းစားပြီး စိတ်ဖြေတယ်။ စိန်ရယ် ဖြစ်သွားမှာပါလို့ မမပြာ ပြောပေမယ့် စိတ်ထဲ စိုးရိမ်စိတ်က အလိုလို ၀င်တာပါပဲ။
ဒီနှစ် နှစ်လပိုင်းက မြန်မာပြည်ပြန်လည်တုန်းက အမေ့ကို စကာင်္ပူ ခေါ်လည်မယ် ပြောလိုက်တော့ အမေက နေ့ရော ညရော အနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး သားပြောတာ သေချာလား၊ အမေတို့ကို ခေါ်မှာလား၊ အမေတို့က တကယ်သွားရမှာလားဆိုတာ.. သတိရတိုင်းမေးတော့တာပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ကို အိပ်မက်ပေးပြီး ဆိုက်ပရပ်စ် ပြန်သွားမှာကိုက စိုးရိမ်သေးတယ်။ သူတို့သားဆိုတော့ စိတ်မထင်ရင် မထင်တဲ့နေရာမှာ စတည်းချတတ်တဲ့ အကျင့်ကို သိပြီးသား။ အမေကတော့ ကိုယ်ပြောထားတဲ့ စကား တခွန်းနဲ့ ကိုယ်မခေါ်မချင်း နေ့နေ့ ညည လည်တဆန့်ဆန့် နဲ့ ကိုယ့်ခေါ်မိန့်ကို စောင့်နေမယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရင်ထဲက သိပြီးသား။
ကိုယ့်အဖေကတော့ ကိုယ်စကာင်္ပူကို ခေါ်လည်မယ်ပြောတော့ ဘာမပြော ညာမပြောပဲ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အပြင်ထွက်သွားတယ်။ ကိုယ်စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ့်အဖေ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားဘူးပေါ့။ ကိုယ်က ခေါ်မယ်ဆိုပြီး မခေါ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်နေလို့လားပေါ့။ ကိုယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ညနေစောင်း ပြန်လာတော့ အားရ၀မ်းသားပဲ သားစိန်.. အဖေစုံစမ်းပြီးသွားပြီး.. ဒီကနေ စကာင်္ပူကို သဘောင်္နဲ့ သွားလို့ရတယ်။ မင်တို့ ငါ့ပတ်စပိုစ့်ယူသွား ငါ့ကိုစကာင်္ပူ သဘောင်္ဆိပ်ကနေစောင့်တဲ့။ ကိုယ်ကလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့ သေချာမေးတော့ မှ အဖေက လေယာဉ်ပျံ ကြီး စီးရမှာ ကြောက်သတဲ့။ အဖေရယ် အဖေ့ကိုယ်လုံးကြီးမှ အားမနာ. အသည်းငယ်တတ်လိုက်တာ...။ အမေကတော့ အောင်နိုင်သူ အပြုံးနဲ့ ဟားးဟားး ညီမတောင် စီးရဲ သေးတာ အကိုက ငကြောက်လုပ်နေတယ် ဆိုပြီး အဖေ့ကိုတောင် မျက်စပစ် စနေတာ။ မျက်စိထဲမှာ အဖေ အားရ၀မ်းသာနဲ့ သဘောင်္စီးမယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံကို ခုထိ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်တုန်း။
ခုချိန်မှာတော့ အဖေရော အမေပါ ပျော်နေကြမယ်ထင်ရဲ့ ။ ကိုယ် သူတို့ အတွက် ပတ်စပိုစ့် လုပ်ပြီးကတည်းက အမေကို ဖုန်းဆက်တော့ သူ့ ယောကျားအကြောင်းကို အတင်းအုပ်သေးတယ်။ ညည်းအဖေက ပတ်စပိုစ့် ရတာနဲ့ သူယူသွားမယ် အကျီတွေ စုနေပြီးတဲ့။ ကိုယ်က ဒါဆို အမေက မထည့်သေးဘူးလားမေးတော့...အိုး.... သားခေါ်မယ် ပြောထားကတည်းက အမေအထုတ်က ခရီးထွက်ဖို့ အဆင်သင့် ဆိုပဲ...။ ခုလောက်ဆို အမေရော အဖေပါ စိတ်လှုပ်ရှာနေရောပေါ့။ ကိုယ်တိုင်တောင် ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားထွက်တုန်းက ဒီလောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေရင် ရန်ကုန်မြို့တောင် အသစ်အဆန်းဖြစ်နေတဲ့ သူတို့ အဖို့ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှာပဲ။
ကိုယ်လဲ စိတ်လှုပ်ရှားတာပဲ.။ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံးမှာ မမပြာ ပါလာပေမယ့် အဖေနဲ့ အမေ ဘယ်လို အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်နိုင်မလဲ၊ ဒီရောက်ရင် ဘာတွေ လွဲနိုင်မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရင်း တွေးပျော်သလို ရင်လဲခုန်ရဲ့ ..။ ကိုယ့်မိဘတွေ မျက်နှာကို မြင်ရဦးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း ကြည်နူးမိပါရဲ့ ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။ ညညလဲ အိပ်မပျော်ပါဘူး။ သူတို့ ရောက်မှပဲ စိတ်အေးရမယ်။ နောက်မဟုတ်ရင် နေ့တိုင်း သွားလဲ ဒီစိတ်၊ စားလဲ ဒီစိတ်..။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်လဲ စကာင်္ပူရောက်တာ ဒီဇင်ဘာဆို နှစ်နှစ် ပြည့်ပါပြီး။ အလည်သဘောနဲ့ လာလိုက်တာ. အလုပ်ကောင်း အကိုင်ကောင်း အပေါင်းအသင်းကောင်းတွေ တွေ့ပြီး တရွာတကျီ ဆောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်နှစ်နှစ် ပြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိဘနဲ့အတူ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေ စုံစုံ ညီညီ ပြန်တွေ့ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း ပိုစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ မကြာခင် အိမ်ရဲ့  BBC ကောင်းကင်ပြာ ပြန်လာတော့မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ပေါက်ပေါက်လဲ ပြန်လာတော့မယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို တနေရာတည်းမှာ တချိန်တည်း ပြန်တွေ့ ရတော့မယ်။ အတွေးနဲ့တင် ပျော်မိတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ အကြောင်းအရင်းခံတော့ ညညက အိပ်မရဘူး။ အနားမှာ ချစ်သူလေးရှိရင်တော့ သူချော့သိပ့်မှာပဲ (ဟမ်.. ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး :D)
ဒီဇင်ဘာမှာ ကိုယ် အရမ်းချစ် အရမ်းလေးစား လို့ ကိုယ့် bully လုပ်လုပ်မိတဲ့ ကိုယ့်ချစ်အမနှစ်ယောက်မွေးနေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်အတွက် နွေးထွေးမယ့် ဒီဇင်ဘာ တခုဖြစ်မယ်။
Writer Sein Lyan Time 4:11 pm 8 comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 7:12 pm 10 comments: Links to this post
ချစ်သူ ဆိုတာ.. သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ချစ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ မချစ်ပေမယ့် ကိုယ် ချစ်နေရင် သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့  ချစ်သူပါပဲ…။ သူကိုယ့်ကို ချစ်နေဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ ကိုယ့်အချစ်ကို အသိအမှတ်ပြုရင်ပဲ ကိုယ်နေတတ် ကျေနပ်နေပါတယ်လေ..။
ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်အချိန် သတိရလဲ လွမ်းလဲ မေးရင်း သတိရတယ်.. လွမ်းတယ် ဆိုတာ တိုက်ဆိုင်မှု တခု ရှိသွား မှ လွမ်းရမှာလား….
ကိုယ်ကတော့ သူ့ကို လွမ်းရမှာထက် စာရင် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ တကူးတက ကျကျ နန ထည့်ထားမိခဲ့တာ…။
သူ့ အသံလေး ကိုကြားရဖို့ အတွက် ကိုယ်သူ့ ဖုန်းသံကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မျှော်လင့်မိတတ်တယ်။ သူ့ကိုယ် ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ စကားတွေ အများကြီး ပြောနေပေမယ့် သူဖုန်းခေါ်တဲ့ အခါ သူ့ အသံတွေကြားမှာ ကိုယ် ကြည်ကြည်နူးနူး ဆွံ့ အံ့ခဲ့ရတာ…။
ကိုယ့် သူ့အတွက် ခံစားတဲ့ စာတွေ စကားလုံးတွေ အများကြီး နဲ့ ကိုယ်ယဉ်ပါးခဲ့ပေမယ့် သူ့ ဆီက စကားလုံးတလုံးလေးကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်ရေရွှတ်နေမိခဲ့ရတာ…။
သူ့ကိုယ့်အတွက် ဘာမှ မရှိဘူး။ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ပြောတုန်းက ကိုယ်က သူ့အတွက် ဘာမဆို လုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြိတ် ပျော်နေခဲ့ဘူးတာ..။
သူ့ ပျော်နေတဲ့ အခါ သူ့ ပြုံးပျော်နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို မက်မက် မောမော ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အခါ… သူ စိတ်ညစ် အားငယ်နေတဲ့အခါ ကိုယ် အားပေးစကားတခွန်းပြောခွင့် ရတဲ့အခါ… သူ စိတ်ထဲမှာ လိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ တခုကို ကိုယ်ကျကျနန လုပ်ပေးခွင့်ရတဲ့အခါ… ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ နစ်နစ်နဲနဲ ပျော်ရွင်ကျေနပ်မှုတွေ အတိုင်းမသိ..။
သူ ဥပေက္ခာပြု မေ့ထားတဲ့အခါ…. သူ ကိုယ့်ကို အမြင်မကြည်လင်တဲ့အခါ ကိုယ် အလိုက်သင့် မသိဘာသာ နေပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ နာကျင်မှုတွေ အတိုင်းမသိ။
တူတူ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးရယ်… တူတူထိုင်ပြီး စကားပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးတခုရယ်… သူ ကြိုက်တတ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ရှိတတ်တဲ့ နေရာလေးရယ်… သူ သုံးနေကျ ပစ္စည်းလေးတွေရယ်.. အဖြူရောင် တိမ်တိုက်တွေရယ်….. တခါတည်း ချစ်ချင်လို့ပါ ဆိုတဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ သီချင်းလေးရယ်… ရခဲ့ဖူးတဲ့ အနမ်း တခုရယ်… နှစ်လိုစွာ ခေါ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ နာမည်လေး တလုံးရယ်… အရာရာတိုင်းက ကိုယ့်အတွက် မပြောင်းလဲဘဲ မနေ့ တနေ့ကလို နွေးထွေး အသက်ဝင်နေဆဲ…။
ကိုယ့်ရင်ထဲ ဆောက်ထားတဲ့ အချစ်အိမ်ကလေးမှာ သူ့ အတွက် ကြင်နာမှုများ အပြည့်ရှိသည်။ ကိုယ့်ရင်ထ်ဲမှာ သူ့ကို ကျကျ နန ချစ်မိသွားလောက်အောင် ကိုယ် နေတတ်သွားပြီး။ ကိုယ်လွမ်ဆွတ် နေတဲ့ အချိန်တိုင်း သူ ကိုယ့်ကိုယ် သတိရနေမလားလို့ မတွေးမိအောင် တွေးတတ်သွားပြီး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရာအားလုံးဟာ သူပဲ ဆိုတာ ကို သေချာသွားပြီး။
ထို အရာအားလုံးသည် ပြီးပြည့်စုံ သည်မဟုတ်သော်လည်း တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု လိုအပ်နေမြဲဖြစ်၏။ထိုထိုသော အရာအားလုံးဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူ့ကို ကြင်နာစွာ စွဲစွဲ မြဲမြဲချစ်မိ၏။ အပြစ်ရှိသည် မထင် သော်လည်း မှားလျှင်ခံနိုင်၏။ သို့သော် တခြားသူများမှလွဲ၍ ထိုသူ၏ ဥပေက္ခာပြုထားသွားခြင်း တစိုးတစိမျှ အလိုမရှိပြီး..။
ချစ်တယ်ဆိုသော တီးတိုးစကားသည် ရွာချလာသော မိုးရေစက် ပမာဏနှင့် ညီမျှ၏။ ပူလောင်ခြင်းမပါ နွေးထွေးသက်ဝင်နေဆဲ အရာအားလုံးသည် ထိုမျက်ရည်မိုးများ အောက်တွင် အေးချမ်းနေလေတော့သည်။
Writer Sein Lyan Time 3:31 pm3comments: Links to this post
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, စိတ်ကူး
Writer Sein Lyan Time 4:36 pm3comments: Links to this post
ဘာလိုလိုနဲ့ အသက်(၃၀)ကျော်သွားပြန်ပြီး။ နောက်နှစ်တွေမှာ စိန့် အသက် ဘယ်လောက်လဲမေးရင် သုံးဆယ်ကျော်လို့ နောက်ထပ် ၉နှစ် ဆယ်နှစ်လောက်ထပ်ဖြေလို့ရသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ် အသက် ၂၀ ကျော်လောက်ပဲ ထင်နေတာ။ ဒါလဲ ဘုရားပေးတဲ့ကုသိုလ်.. ကိုယ့်ကုသိုလ်ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ရင်တော့ အသက်ရလာလေ ပိုချော ပိုခန့်လာလေလို့ ခံစားရတယ်။ ဘယ်သူပြောပြော မပြောပြော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ မှန်ကြည့်ပြီး အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်။ အဓိကက ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာနေဖို့ပဲ မဟုတ်လား။
အသက်(၃၀)မှာ ဘာတွေ မယ်မယ်ရရ လုပ်ဖြစ်သလဲမေးရင် လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀မျိုးစုံ၊ အတွေ့ အကြုံမျိုးစုံနဲ့ တခြားလူ မကြုံဖူးတာ အကုန်ကြုံရ လုပ်ရပါတယ်။ မင်းသားမင်းသမီးတွေက ရုပ်ရှင်တွေ၊ ပြဇာတ်တွေထဲမှာပဲ သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခုထိ လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ် အစုံပါပဲ။ စားပွဲထိုး၊ ခြံရှင်း၊ အိမ်ရှင်း၊ ဆေးသုတ်၊ မြက်နှုတ်၊ ချက်ပြုတ်၊ လူအိုကြည့်၊ ရုံးတက်၊ အုတ်ဂူရှင်း စတဲ့ စသဖြင့် အလုပ်တွေကို လက်မလည်အောင် ဘ၀စုံအောင် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အတွေ့ အကြုံ ရသလို ဘ၀လဲ နာခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဘ၀နာတိုင်း မှန်ကြည့်ပြီး ခဏခဏ ငိုရတာလဲ အမော။ မှန်ကြည့် ငိုတယ်ဆိုတာကလည့် ကိုယ့်ကို သနားမယ့်သူ မရှိလို့ ကိုယ်ငိုတာကိုယ်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သနားတာပါ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တွေက လက်ချလ်မီး မျိုးဆက်လို့ ပြောရအောင် လက်မလည်အောင် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာတွေ အဖတ်တင်လဲ မေးရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူမွေး သူမွေး ပြောင်အောင် နေနိုင်နေသေးတာ အဖတ်တင်ပါတယ်။ ဖွားဖက်တော်ကို မပေါ်ရုံ လုံအောင် ဖုံးနိုင်ရုံတင်မကဘူး၊ တန်ဆာအမျိုးမျိုးကို ဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဘယ်လို တန်ဆာလဲ ဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားအောင် ပြောလို့မရဘူး။ တော်ကြာ အမြစ်ပါ ဖြုတ်ယူသွားမယ် သူတွေ ရှိနေလို့ပါ။
ကျန်းမာရေး အားဖြင့်တော့ ငါးရံ့ ငါးခူ ရောင်းတဲ့ ငါးစိမ်သည် ၀င်စားသူပီပီ ဒီဘ၀မှာ ခံနေရတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကတော့ တခါတခါ ငါးပြေးမ ဆားထိသလို တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေအောင် ကိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်တတ်မြောက်ထားတဲ့ မကြားမမြင် ရမ်းသန်းဗေဒင်အရ အသက်(၃၅)နှစ်မှာ သေနိုင်တယ်လို့ လူကြားသူကြား တွက်ချက်မိတော့ ၀မ်းနည်းပက်လက်နဲ့ အ၀တ်အစားလုတဲ့သူတွေ၊ အမွေလုတဲ့သူတွေနဲ့ ချက်ခြင်းစည်းကားသွားတဲ့ အပြင် မရသေးတာကို အဝေမတည့်တာနဲ့ စကားများ စိတ်ကောက်ကြတာကိုလဲ ဆုံရပြန်တယ်။ ကိုယ်ဆော့မိတဲ့ ပါးစပ်နဲ့ အသက်(၃၅)နှစ်မှာ သေမယ်ပြောမိလို့ ကိုယ့်ကိုယူမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ချစ်သူလဲ ကလေးတွဲလောင်းနဲ့ မုဆိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး အကြောက်အကန် ငြင်းတာကိုလဲ ခံလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တနေ့ တခြားချောလာတယ် ပြောမိတော့လဲ အားရပါးရထောက်ခံကြပြန်သေးတယ်။ “သေပန်း ပွင့်တာပါတဲ့ “။ ကဲ….
ဆိုက်ပရပ်စ် ရောက်တဲ့ အချိန်နဲ့ စကာင်္ပူရောက်တဲ့ အချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့ ဒီနှစ်က ကိုယ့်အတွက်ကောင်းပါတယ်။ ရုံးတက် ကလေး(သူဌေး) ထိန်း ရတာက လွဲလို့ပေါ့။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ရတယ်။ ကိုယ်ရုံးတက်ချင်တဲ့ပုံစံ အတိုင်းတက်ရတယ်။ ကိုယ့်နားမှာ ကိုယ့်ကို အားပေးမယ်သူရှိတယ်။ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ အမြင်ကတ်တာရော၊ အမြင်မကတ်တာရောပေါ့။ ကိုယ့်ကိုဖေးမမယ်သူရှိတယ်။ကိုယ်ဘယ်လို ရန်ရှာရှာ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူရှိတယ်။ ရုံးရောက်တော့လဲ ကိုယ့်နဲ့ တူတူအလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေက ကိုယ့်ကို ချစ်ကြတယ်။ အရေးပေးကြတယ်။ ခင်ကြတယ်။ ကိုယ်ပြောရင်ပြီးတယ်။ အဟမ်း.. ရုံးမှာက ကိုယ်အပါအ၀င် လေးယောက်ပဲ ရှိတာပါ။
ဒီအတွက် စင်္ကာပူကို အလည်ခေါ်တဲ့သူရော၊ စကာင်္ပူမှာ နေအောင် အတင်းတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ မောင်နှမတွေ ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ နေရတာ ကျေနပ်တဲ့ထဲမှာ ဒါလဲပါတယ်။ မဟုတ်တာလဲ မလုပ်။ ဟုတ်တာလဲ မလုပ်။ လုပ်တာတွေလဲ တခု မှ မဟုတ်ဘဲ တနှစ်နဲ့ တနှစ် အပြောင်းအလဲမှာတော့ ဒီနှစ်က ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် အချစ်ရေးလား… ကိုယ့်က(၃၅)နှစ်မှာ သေမယ်ပြောလို့ ကိုယ့်ရည်းစားက ယူဖို့ကို ရီဂျက်လုပ်ထားတယ်။ ငါမရှိတဲ့ နောက်ပိုင်း ငါ့အစားထိုးပေးမယ် လို ဒစ်စကောင့် ပေးပြီး သဘောထား ကြီးပြတာတောင် ဘူး ဆိုတာချည်းပဲ။ ကဲ.. တော်ပါပြီး… အပီလက်တာ မတင်တော့ဘူး။ သူလဲ ဒိတ်အောက်နေပြီး။ နှစ်လဲ ဆယ်နှစ်ကျော် ကြာနေပြီး။ ဒီလောက်ဆို တော်သင့်ပြီးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ် ရီဂျက်လုပ်တာတွေလဲ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး။ လမ်းတွေ့တိုင်း စိတ်နဲ့ မတွေ့ရင် ခရော့စ် ပဲ။ ဒီတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ အသစ်ကလေးနဲ့ လှုပ်ရှားမယ် စိတ်ကူးတယ်။ နီးနီးနားနား ရုံးက တယောက်ကို ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ထားတယ်။ သူက မြောင်းက ဖောက်နေပြီး။ ကိုယ့်ရေက နည်းနေသေးတယ်။ ဒီလိုပြောရတာကလဲ တော်ကြာ ဒီအရွယ် ရီးစားမရှိလို့ ကိုယ့်ကို လူပျိုကြီးလို့ လာခေါ်မှာ ကြောက်လို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ ဟန်ကို့ဖို့ ဆိုတာမျိုး ရှင်းပြရသေးတယ်။ ဒါကလဲ လူပျိုကြီးစရင်း ၀င်သူတိုင်း ပေးနေကျ အကြောင်းပြချက်တွေ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရေက ထွက်လို့ကို မရသေးတာ။
ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ဘာလိုချင်လဲ မေးရင်တော့ လက်ရော ခြေရော ချိုးလို့ မလောက်ပါဘူး။ အနည်းဆုံးလိုချင်တာလေးတွေ ဖဘနဲ့ ဂျီတော့မှာ တင်လိုက်မှပဲ မိတ်ပျက်သွားတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ ကော့မန့်ရေး လိုက်ခ် လုပ်တဲ့ သူတွေတောင် လုပ်ချင်ရက် လက်တို့နဲ့ ပြန်သွားကြတယ်။ ဒါကလည်း စေတနာပါ။ တော်ကြာ ပေးချင်ရက်နဲ့ ဘာပေးရကောင်းမလဲ၊ စိန်ဘာကြိုက်တတ်မှန်းမသိလို့ ဆိုတာမျိုး ဆင်ခြေမပေးနိုင် ရအောင် ကြိုက်တတ်တာလေးတွေ တင်လိုက်တာပဲ။ ပေးတာမပေးတာကတော့ ပေးသူအပိုင်း။ လိုချင်တာပြောတာနဲ့ မျှော် တာကတော့ မွေးနေ့ ရှင်အပိုင်း။ ဒီတော့ကာ ခုထိတော့ လိုချင်တာ မရသေး။
ဒီနှစ်မှာတော့ ဦးဦးဖျားဖျား မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို ချစ်မကြီးနော် ဆီက ရပါတယ်။ မပုံ့ (DOZO) ဒီဇိုင်နာရဲ့ အကျီပါ။ ဒုတိယ လက်ဆောင်က ချစ်သူငယ်ချင်း ငလင်းဆီက အကျီပါ။ ရရချင်း ရုံးဝတ်သွားလို့ သူဌေး ဖောအင်လပ် ဖြစ်သွားတဲ့ အကျီပါ။ လူကိုမဟုတ်ဘူးနော်။ အကျီ။ တတိယ လက်ဆောင်က ကဗျာဆရာမ ချောချောလှလှ မမဒါ ရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ။ LEVI’S ဘောင်းဘီပါ။ လောလောဆယ် ဆိုင်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့လက်ဆောင်တွေကိုလဲ မျှော်နေပါသေးတယ်။ ဘယ်သူများဘာများပေးမလဲ လို့ပါ။ ရရမရရ ရင်ခုန်ရတာကိုက အမြတ်ပေါ့။
ဒီနေ့တော့ ရုံးမှာ သူဌေးက မွေးနေ့ စပရိုက် ဆဲဗင်းအပ် လုပ်ပါတယ်။ နေ့လည်ကိုယ့်ကို အပြင်ခိုင်းပါတယ်။ သူဌေးကတော့ ရုံးနောက်ခန်းမှာ ကိတ်မုန့်တွေပြင် ၀ိုင်တွေပြင်ပြီး ကိုယ်ပြန်ရောက်လာတော့ တံခါးဝမှာ ကိတ်မုန့်လေးကိုင်ပြီး စောင့်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀ိုင်သောက်ပြီး စကားပြောတယ်။ သူဌေးက သီချင်းဆိုပြီး ကပြပါတယ်။ ၀ိုင်တခွက်လောက်နဲ့ မျက်နှာတခုလုံး ပန်းသီးကြီးလို နီတွတ်နေပါတယ်။ ပြီးတာ့ ကွန်ဖန်မေးရှင်းလက်တာ ထပ်ပေးပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ် ရီဆိုင်းတင်ထားတာတောင် မေ့နေတာ။ ဒီနေ့တော့ ပျော်နေတဲ့ သူဌေးကို ကြည့်ပြီး အားနာ သနားမိပါတယ်။ အလုပ်ဆက်လုပ်မယ် ဆိုတာလဲ မွေးနေ့ စကားပြောလိုက်ပါတယ်။ ရုံးက၀န်ထမ်းတွေ ကိုယ့်ကိုချစ်ကြတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ကျေနပ်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ဒီနှစ်က အရင်နှစ်ထက်စာရင် ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ အမိမြေကိုပြန်ရတယ်။ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ မိဘတွေ မောင်နှမတွေကို ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ နေရတယ်။ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ အိမ်အကျယ်ကြီးမှာ ချစ်တဲ့ မောင်နှမတွေရဲ့ ချီးပေါက်သံတွေကြား ပျော်ရွှင်စွာနေရတယ်။ ရုံးကလူတွေနဲ့ တွဲလုပ်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။ လိုနေတာ…ကတော့…. ၁၅၀၀ အချစ်ပေါ့။
လာဘ်ဝင်တဲ့ နှစ်မှာ စုတ်လဲ ၀င်ပါစေလို့ ဘုရားမှာ ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်အောင် ဆုတောင်းရင်း…
Writer Sein Lyan Time 1:18 pm5comments: Links to this post
လင်းအာရုဏ်ကိုပင် မဆောင်ကျင်းနိုင်လောက်အောင် မိုးက တစိမ့်စိမ့်နိုင်လှသည်။ တဝေါဝေါ မြည်ဟည်းနေသည့် ရထားသံ၊ တုန်ခါမှုဒဏ်ကို ထီမထင်ဟန်ပြုနေသော ဖရိုဖရဲ ထရံကာ ဓနိမိုး ကျူးကျော်ရပ်ကွက်လေးမှာ မိုးစက်များအောက်တွင် အိပ်မောကျနေသည်။ ထိုရပ်ကွက်ကို စင်ကာပူ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ဟု သမုတ်ကြ၏်။ ထိုကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွင် နာမည်ကြီး အိမ်ယာမဲ့ မိသားစု တစု ရှိသည်။ လောင်းကျော်သည်။ မျောက်ရှုံးသည်။
ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ထဲက မောင်နှမများတဲ့ မိသားစုဝင် မိန်းမသား များက အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာလုပ်ကြသည်။ ဈေးရောင်း၊ပွဲစား၊ ခြံစိုက် စသည့် အလုပ်များအဓိကလုပ်သည်။ ယောကျားလေးများက ဘောပွဲလောင်းသည်။ အသည်းကွဲရင် အရက်ဆိုင်ထိုင်သည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး သိသမျှ ကမ္ဘာ့ရေးရာကို မှန်မှန် မမှန်မှန် မျက်စိမှိတ် လေကန်သည်။ ပွားသည်။ ငြင်းသည်။ လေပွားသဖြင့် တံတွေးစင်သည်။ သို့သော် တယောက်ကို တယောက်လည်း အကာအကွယ်ပေးကြပြန်သည်။ တနေ့လုပ် တနေ့စားများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပြဿနာကလည်း မကင်း ၊ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရန်ဖြစ်သည်။ တော်ကြာ ပြန်ချစ်ကြပြန်သည်။ ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားများက ဗေဒင် အရမ်းယုံကြည်သည်။
ကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွင် ဗေဒင်ဆရာ သိဒ္ဒိဆရာစိန် ဆို မသိသူ မရှိ။ ဗေဒင်တွက်သည်။ ရုပ်ကြည့် လဏ္ခာဟောသည်။ မမှန်သည် ဟူ၍ မရှိစေရ။ သွေးထွက် သေးထွက်အောင် မှန်သည်။ လာတွက်သည့် သူတိုင်း ပါးစပ်လေး တဟဟ ၊ လက်လေးတဖျဖျနဲ့ ပုတ်သင်ညို ထက် မက အချက်ပေါင်းများစွာ ခေါင်းညိတ်ထောက်ခံသည်။ များသောအားဖြင့် ရပ်ကွက်ထဲမှ အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီး လုပ်သူမိန်းမများ ခဏခဏ လဏ္ခာကြည့်သည်။ လာကြည့်တိုင်း မှန်သည် ပြောသည်။ ဗေဒင်ဆရာ နာမည်ကြီးသည်။ ဆရာစိန် ဆို မသိသူမရှိ။ တွက်မည့်သူများ တန်းစီနေသည်။
ဗေဒင်ဆရာတွင် ညီမတယောက်ရှိသည်။ နာမည်က မိအေး။ ရပ်ကွက်ထဲတွင် အတိုးချေးစားသည်။ ရပ်ကွက်တကာ လှည့် သိသမျှ မှတ်သမျှ အတင်းကို တအိမ်တက် တအိမ်ဆင်း ဖောက်သည်ချသည်။ ရယ်စရာတွေ ပြောသည်။ လူချစ်လူခင်ပေါသည်။ မိအေးထံမှ ပိုက်ဆံချေးကြသည်။ အတိုးပေးခါနီး ကြမှ မိအေးကို ရှောင်ကြသည်။ မိအေးက မရ တွေ့ရာသချိုင်း ဓားမဆိုင်း၊ အတိုးမရလျှင် ပိုက်ဆံချေးသော အိမ်ပေါ်ကနေမဆင်း။ တနေကုန် တနေခန်း ထိုင်တောင်းသည်။ နောက်ဆုံးမရလျှင် ထိုအိမ်မှ သုံးစရာ ပစ္စည်းတခု မလာတတ်သည်။ ညရောက်လျှင် အကိုဖြစ်သူကို ရပ်ကွက်သတင်း ကုန်စင်အောင် ပြောသည်။ ထိုရရှိသောသတင်းများဖြင့် ဆရာစိန် တယောက် ဗေဒင်ဟောလျှင် သေးထွက်အောင် မှန်လေသတည်း။
ရပ်ကွက်ထိပ် ညောင်ပင်အောက်တွင် ကွမ်းယာဆိုင် တဆိုင်ရှိသည်။ ရှိသမျှ လူပျို ၊ လူအို များ ထို ကွမ်းယာဆိုင်နှင့်မကင်း။ သတင်းလိုချင်လား၊ ကွမ်းယာဆိုင်သွား။ ပြိုင်ငြင်းမလား ၊ ကွမ်းယာဆိုင်သွား။ ကွမ်းယာတဗူးဝယ်ရင် ရှိသမျှ ရပ်ကွက် အကြောင်းကို မေးမေး ၊ မမေးမေး အာပေါင် အာရင်းသန်သန် ပြောမည့် ကွမ်းစား မိပြာ ရှိသည်။ ကွမ်းစားမိပြာကတော့ ဗေဒင်ဆရာစိန် နဲ့ မိအေးတို့ရဲ့ အမအကြီးဆုံး။ မျိုးနှင့် ရိုးနှင့်လာသည်။ ရပ်ကွက်ထဲတွင် သိချင်သမျှ မိပြာကိုမေး။ မိပြာမသိတာမရှိ။ ဒါပေမယ့်ကွမ်း တော့ဝယ်ရသည်။ အကြွေးစားရင် မိအေးလက်နဲ့ လွတ်အောင်ပြေး။ မိသားစု အဲလို စည်းလုံးသည်။
ဒါပဲလား။ မဟုတ်သေးဘူး မိပြာ နဲ့ နှစ်ကြီးနှစ်ငယ် အကိုတယောက်ရှိသေးတယ်။ ရိုးတယ်။ အတယ်။ လက်ထိုးပေး မကိုက်ဘူး။ သွား မကောင်းလို့။ မဆိုစလောက်လေး ထိပ်ပြောင်တယ်။ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေတော့ များလှတဲ့ မောင်နှမတွေကို ဒိုင်ခံထိန်းတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ ၀ါသနာပါတဲ့ စာတိုပေစရေးတယ်။ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် စာတွေက နုတယ်။ မောင်နှမတွေက ၀ိုင်းအားပေးတယ်။ မရေးပါနဲ့ ပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ရှိသမျှ မောင်နှမတွေကို ပတ်ထိန်းရတော့တယ်။ တခုတော့ရှိတယ်။ အပြင်ထွက်တာ ၀ါသနာကြီးတယ်။ အငယ်တွေ လစ်ရင် လစ်သလို အပြင်ခိုးထွက်တယ်။ အပေါင်းအသင်းမက်တယ်။ ညီဖြစ်သူ ဗေဒင်ဆရာကို ကြောက်ရတယ်။ မကြောက်ရင် အိမ်ပြန်အိပ်မှာတောင်မဟုတ်။
လူပျိုကြီးပိုးနေတာက နှစ်အိမ်ကျော်က အပျိုကြီး ဒေါ်မိုး။ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် အချောအလှလေး။ ဇီဇာကြောင်လွန်းလို့သာ အပျိုကြီး ဖြစ်နေတာ။ အပျိုကြီးဒေါ်မိုးက ပေါက်ဖော်မ ဖွေးဖွေးတို့နဲ့ သူငယ်ချင်း။ စီးပွားဖက်။ ဒေါ်မိုးက အမျိုးသမီးအ၀တ်အထည်တွေ ရောင်းတယ်။ ဒေါ်မိုးကြိုက်တဲ့ ပုံစံက ကိုးရီးယားမင်းသာ စပိုင်လို ရုပ်မျိုး။ ဒါပေမယ့် အရွေးလွန်တော့ ခုထိအပျိုကြီး ဖြစ်နေဆဲ။ လူပျိုကြီးကိုတော့ အကိုတယောက်လို အရေးပေးဆက်ဆံတော့ အကိုကြီးက ဟက်ကော့ကြီး ဖြစ်နေတယ်။
များလှတဲ့ ပဒေသာပင် မောင်နှမတွေ။ ဗေဒင်ဆရာအောက်မှာ နောက်ထပ်လေးယောက် ကျန်သေးတယ်။ နှစ်ယောက် က တနှစ်ကြီး တနှစ်ငယ် အငယ်မ နှစ်ယောက်။ ပေါက်ဖော်မနဲ့ ဖွေးဖွေး။ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် နှစ်ယောက်လုံးက စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်။ နှစ်ယောက်ပေါင်း ဈေးရောင်းချင်တယ်။ ဈေးရောင်းကောင်းအောင် အကို ဗေဒင်ဆရာကို ယတြာ ခဏခဏ ချေခိုင်းတယ်။ အကြောင်းသိမို့ထင်တယ်။ ယတြာက မကျေဘူး။
ရုပ်ကလေးကလဲ ရှိ ဈေးရောင်းတတ်ဆိုတော့ ပေါက်ဖော်မနဲ့ ဖွေးဖွေးက စွံတယ်။ ပေါက်ဖော်မကို လမ်းထိပ်က ငပေါ်ဆိုတဲ့ကောင်က ပိုးတယ်။
ငပေါ်ဆိုတဲ့ကောင်က ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘောလုံးပွဲလောင်းတယ်။ လောင်းတိုင်း (၁)ကျပ် ထက်မပိုဘူး။ ဒါပေမယ့် (၅၀၀) ဖိုးလောက် ဘောပွဲ အကြောင်းပြောတယ်။ အငြင်းသန်တယ်။ ပြောရင်တော့ ငပေါ်လုပ်တဲ့ အလုပ်က အီလက်ထောနစ် အင်ဂျင်နီယာ။ ဘယ်ထရီအားသွင်းတဲ့ အလုပ်။ ပေါက်ဖော်မ အကိုလတ် ငဆောင်းနဲ့က ချိန်းပြီး သတ်နေကြ။ မလန့်ပါနဲ့။ ပုစဉ်းနှစ်ကောင်ကို ကို ကြိုးချည်ပြီး သတ်ခိုင်းတာ။ ညီမကို ပိုးတော့ အကိုကိုတော့ ရအောင်ပေါင်းတတ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပညာရှင်ငပေါ်။
ဖွေးဖွေးကို ကြိတ်ပိုးတာကတော့ နောက်ဖေးလမ်းက ညစောင့် ငမျိုး။ မပွင့်တပွင့် ငမျိုးကို ဖွေးဖွေးက ရီးစားစကားပြန်ပြောရတယ်။
ဖွေးဖွေးနဲ့ ပေါက်ဖော်မတို့ မှာ နောက်ထပ် အကိုနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။
ငထိုက်ဆိုတဲ့ ငပျင်း။ လုပ်တဲ့ အလုပ်က မိုးပျံဗူဗောင်းရောင်းတယ်။ ရောင်းတဲ့ နေရာက သူ့အမကွမ်းယာဆိုင်ဘေးမှာ။ မိုးပျံဗူဗောင်းကိုတော့ တိုင်တတိုင်မှာ ချည်ပြီး ကွမ်းတမြုံမြုံ နဲ့ စာအုပ်တအုပ်ယူပြီး နှပ်တယ်။ တနေ့တလုံး ကုန်တယ်။ ကုန်တယ်ဆိုတာ ကြိုးလွတ်သွားတာမျိုး၊ လေလျှော့သွားတာမျိုး။
အလတ်ကောင် ငဆောင်းက သာတယ်။ ဗလအားကိုးနဲ့ အမကွမ်းယာဆိုင်ဘေးမှာ ဆိုက်ကားဂိတ်ထိုးတယ်။ စိတ်ပါရင် နင်းတယ်။ စိတ်မပါရင် ခွေခေါက်ပြီး ဆိုက်ကားပေါ်မှာ ခွေအိပ်နေတတ်တယ်။ စိတ်ကြည်တဲ့ ညဆို ရပ်ကွက်လှည့် ဂစ်တာတီးတတ်ပြီး စိတ်ညစ်တဲ့နေဆို လမ်းထိပ်က လူပြိုကြီး ကိုစိုင်း အရက်ဆိုင်မှာ ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီး အရက်သောက်တယ်။ ကိုစိုင်း အရက်ဆိုင်က နာမည်ကြီးတယ်။ အရက်နဲ့ မြည်းဖို့ ရှမ်းချဉ်တွေ ချပေးတတ်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကြီးပေါ့။
အငယ်ဆုံးကတော့ ရောဂါသည်ငတမာ။အပေါ့သွားရင် အရေတွေပဲထွက်တယ်။ မျက်စိမှိတ်ရင် ဘာမှမမြင်ရတဲ့ ရောဂါဆိုးကပ်နေတာ။ ရောဂါထူလွန်းလို့ ညီအကိုမောင်နှမတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ထားတယ်။ ဘုန်းကြီးဝေယာဝတ်စလုပ်ရင်း တပိုင်တနိုင် အပင်စိုက်ခိုင်းထားတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဦးသီ ဆိုတဲ့ မိန်းမကြောက်တဲ့ လူကြီးတယောက်ရှိသေးတယ်။ မိန်းမကို ကြောက်လို့ အလုပ်နဲ့ အိမ်၊ အိမ်နဲ့ အလုပ်ကလွဲရင် ကျန်တာငရဲ လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ မောင်နှမ များတဲ့ ဗေဒင်ဆရာ အိမ်မှာ ဖဲဝိုင်းခဏခဏ ရှိတယ်။ ဦးသီ မိန်းမ ရွာပြန်ရင် ဦးသီက ပိုက်ဆံထုတ်ပိုက်ပြီး ဗေဒင်ဆရာ အိမ်မှာ အလှူလာပေးလေ့ရှိတယ်။ မိန်းမရွာက ပြန်ရောက်ရင်တော့ ဦးသီတို့ ဗေဒင်ဆရာအိမ်ကို ခြေဦးတောင်မလှည့်တော့။ လမ်းမှာတွေ့ရင်တောင် အကြွေးရှင်လို ပုန်းနေပြန်ရော။
ဗေဒင်ဆရာစိန်မှာ ငယ်ပေါင်း သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းဗေဒင်ဆရာကို ယုံပြီး မိန်းမရဖို့ ခဏခဏ ယတြာချေပေမယ့် ခုထိတော့ လူပြိုကြီး ဖြစ်နေတုန်း။ ခုထိလဲ ယတြာ တောင်းနေတုန်း။
ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုမောင်နှမတွေက ရပ်ကွက်ထိပ်က ဘုန်းကြီးကို ကိုးကွယ်ကြတယ်။ ဘုန်းကြီးက စကားနည်းတယ်။ မေးခွန်းတခုမေးရင် မေ့လောက်မှ ဖြေတယ်။ တရားနာဖို့သွားရင် ဘုန်းကြီး တရားမပေးခင် အိပ်ပျော်ကြတယ်။ ဘုန်းကြီးက ငယ်ဖြူတော့မဟုတ်ဘူး။ အသက်ရလာမှ လောကီကိုစိတ်ကုန်ပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတာ။ ငယ်နာမည် မောင်တီ။ ဘွဲ့တော်က အရှင် အိမ်ဒယိရ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရပ်ကွက်ထဲမှာ မောင်နှမတွေများလို့ ရှုပ်ထွေးပွေလီပေမယ့်။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်။ တနေ့တနေ့တော့ လောကီအလုပ်တွေလုပ်ရင်း မိုးချုပ်ရတယ်။ ပြီးရင်တော့ အာရုဏ်ဦးရောင်ခြည်အောက်မှာ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ သက်ဝင်နိုးထလာရတော့တာပါပဲ။
Writer Sein Lyan Time 6:31 pm4comments: Links to this post